အားလပ်ရက်မှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း • POINT
April 9, 2019 November 15, 2019
*** Unicode ***
အားလပ်ရက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးတွေ အရောင်တောက်လာကြပါတယ်။စိတ်တွေတက်ကြွလာပါတယ်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ ဦးနှောက်က ငါဘာလုပ်ရမလဲ တွေးနေပါပြီ။ ခရီးထွက်ရမလား။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့မလား။ အိမ်မှာ အိပ်ရမလား၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရမလား အစရှိတဲ့ အတွေးပေါင်းစုံ ခေါင်းထဲကူးလာဆန်ခတ်နေပါပြီနော်။ မညာရကြေး။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ခရီးထွက်ချင်တဲ့သူကလည်းထွက်ကြဖို့တိုင်ပင်ကြပါတယ်။ မိသားစုနဲ့ အပြင်အလည်အပတ်သွားမယ့်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ရည်းစားနဲ့ချိန်းထားသူတွေ၊ ဘာမှမလုပ်ပဲ အိပ်မယ့်သူတွေ မျိုးစုံပါပဲ။ လူတစ်ကိုယ် အကြိုက်တစ်မျိုးမလား။ စာရေးသူကတော့ စာဖတ်ရင်ဖတ်၊ အိပ်ရင်အိပ် နဲ့ အချိန်ကုန်ဆုံးတတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာတော့ အသည်းစွဲပါပဲ။ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှု၊ ကိုယ်ချင်းစာတတ်မှု၊ ပျော်ရှွင်စရာ၊ ဟာသ အစရှိတဲ့ ခံစားမှုပေါင်းစုံကို ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာပဲ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ရရှိခံစားနိုင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်းက တကယ့်ကမ္ဘာအစစ်က နေရာတိုင်းကို ကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိခံစားရစေပါတယ်။
ဘာကြောင့်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာလို့ထင်ပါသလဲ။ အဖြေက ရှင်းရှင်းလေးပါ။ အချိန်ပိုင်းနဲ့ ကိုယ့်ခေါင်းထဲကို တစ်သက်တာမမေ့နိုင်စေမယ့် ခံစားမှုတစ်ခုကို ထည့်လိုက်နိုင်ခြင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ သဘောကွဲလွဲခွင့်ရှိပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကောင်းတစ်ကောင်းက လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို လွှမ်းမိုးသွားစေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်က ဘာရနိုင်မလဲဆိုတာချည်းမတွေးနဲ့၊ ကိုယ်ကဘာပေးနိုင်မလဲဆိုတာတွေး လို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ရုပ်ရှင်ထဲကနေ အတုခိုးစရာတွေ၊ သင်ယူစရာတွေ၊ လိုက်နာသင့်တာတွေ များစွာရှိပါတယ်။ ပြောမကုန် ဟောမကုန်တွေဖြစ်ကုန်မှာစိုးလို့ ဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်လိုက်ပါတော့မယ်။
ရုပ်ရှင်ထဲမှာလည်း အမျိုးအစားပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ စွန့်စားခန်းတွေကို ကြိုက်တာလား၊ အချစ်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တာလား၊ ကားတွန်းလား၊ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ဖွယ်လား၊ ဟာသကားလား များစွာရှိပါတယ်။ဘယ်လို ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားပဲကြည့်ကြည့် ယူတတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။ ကိုယ်ကြည့်ဖူးတဲ့ ကားကောင်းလေးတွေကို ဖောက်သည်ချပါရစေ။ ကြည့်ဖူးကောင်းလည်း ကြည့်ဖူးပါလိမ့်မယ်။
Into the Wild ဇာတ်ကားလေးအကြောင်းပြောပါရစေ။ ထိုဇာတ်ကားထဲမှာဆို အသက် ၂၀ ကျော်၊ဘွဲ့ရပညာတတ်လူငယ်တစ်ဦး ၊မိသားစု၊ငွေရေးကြေးရေး ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိပဲ တောထဲကိုထွက်သွားခဲ့တယ်။ အဲ့ကားထဲမှာ စဉ်းစာစရာအချက်လေးက အစစအရာရာပြည့်စုံနေတဲ့ လူငယ်တစ်ဦးက ဘာကြောင့်အကုန် စွန့်လွှတ်ပြီး တောထဲကိုထွက်ခဲ့ရတာလဲ ဆိုတာပါပဲ။
MarginCall၂၄နာရီကာလပတ်လုံးဘဏ်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ခဲ့တဲ့အပေါ်အခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်တယ်။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်အစက ငွေကြေးကပ်ဆိုက်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ Zachary Quinto နှင့် Jeremy Irons အပါအဝင် မင်းသား၏လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ဘယ်လောက်ခက်ခဲပုံ နှင့် ပုန်းကွယ်နေတဲ့အရည်အချင်း စိတ်ကူးသစ်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်လာအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပုံတို့ကို ရိုက်ကူးပြထားတာဖြစ်တယ်။
The Godfather ဆိုတဲ့ကားပေါ့။ဒီကားတော့လူတော်တော်များများ ရင်းနှီးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်အဖြစ်သာမက ဝတ္တုအဖြစ်လည်း ကျော်ကြားပါတယ်။ မားဖီးယားဂိုဏ်းကြီးထူထောင်ပြီး ဒုစရိုက်မှုတွေကို စနစ်တကျကျူးလွန်ကာ စုံထောက်တွေ၊ ရဲတွေကို လက်တစ်လုံးခြားလှည့်ပတ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။Beauty and the beast ကာတွန်းကားက Disney Animation ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထင်ကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ကို ပညာပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။ အဲ့လိုလူတစ်ယောက်ကို ကိုယ်ချင်းစာတတ်အောင်၊ စိတ်ရှည်တတ်အောင် ပညာပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။ ကားတွန်းကားဖြစ်ပါစေ ယူတတ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။နောက်တစ်ကားကတော့ Journey’s End ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ပြဇာတ်တွေမှာအောင်မြင်ပြီး ရုပ်ရှင်အဖြစ် အသက်သွင်းထားတဲ့ကားကောင်းပါ။ ဇာတ်လမ်းကတော့ ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးခါနီးမှာ ရန်သူတပ်နဲ့အနီးကပ်ဆုံး ရှေ့တန်းမှာ ၆ ရက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဗြိတိန်စစ်တပ် တပ်ခွဲအကြောင်းဖြစ်တယ်။ ဇာတ်ကားထဲမှာ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်မြက်ရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ပွဲဆန့်ကျင်တာတွေ တစ်ခုမှမပါပဲ စစ်သားအားလုံးရဲ့ အသိမှာ ရန်သူတွေ ကြာသပတေးနေ့လာမယ်၊ တပ်ကူတွေလာမှာမဟုတ်ဘူး ၊ပြန်လည်းမပြေးရဘူးဆိုတဲ့ အမိန့်ကို နောက်ဆုံးအထိ နာခံခဲ့ကြပုံကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်။
Shadow ဇာတ်ကားပေါ့။ဇာတ်လမ်းကျောရိုးကတော့ မိတ်ဆွေဖွဲ့ထားတဲ့ အင်အားကြီးနိုင်ငံတော်အောက်မှာ ပုန်မကန်ရဲ၊မိမိတိုင်းပြည်ကို ပြန်လည်မရယူရဲတဲ့ ဘုရင်တစ်ပါးနဲ့ မိမိတိုင်းပြည်ကို ပြန်လည်ရယူဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ စစ်သူကြီးတစ်ယောက်တို့ကြားက ပဋိပက္ခကို ဇာတ်လမ်းကကျောရိုးယူထားပါတယ်။ စစ်သူကြီးအစစ်မဟုတ်ပဲ ကိုယ်ပွားအတု (shadow) သာမာန်လူသားတစ်ယောက်။
ဒီမှာတင် ထိုယောကျာ်း သုံးယောက်တို့ရဲ့ကိုယ်စီအားပြိုင်တဲ့အကြောင်းကို ဦးစားပေးပုံဖော်ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို ပြောချင်တာကတော့ အရမ်းလှတယ်ဆိုတာပဲ။ ဇာတ်ကားထဲမှာ အဖြူနဲ့အမဲပဲ ထင်ရလောက်အောင်ကို monochromatic ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲ လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့အသားအရောင်ကို Hightlight လုပ်ထားပြီး သွေးထွက်တဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းမှာဆို သွေးကို အရောင်အစစ် နဲ့အသုံးပြုထားတယ်။
ဒီမှာတင် တော်တော်လှသွားပြီဖြစ်တယ်။ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ဆိုတာ အနားယူခြင်းတစ်မျိုးပါ။ကိုယ့်ခေါင်းထဲကို အသိတစ်ခု ထည့်သွင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ အနားယူရင်း ဗဟုသုတ တိုးတာပေါ့။
အားလပ်ရက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးတွေ အရောင်တောက်လာကြပါတယ်။စိတ်တွေတက်ကြွလာပါတယ်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ ဦးနှောက်က ငါဘာလုပ်ရမလဲ တွေးနေပါပြီ။ ခရီးထွက်ရမလား။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့မလား။ အိမ်မှာ အိပ်ရမလား၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရမလား အစရှိတဲ့ အတွေးပေါင်းစုံ ခေါင်းထဲကူးလာဆန်ခတ်နေပါပြီနော်။ မညာရကြေး။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ခရီးထွက်ချင်တဲ့သူကလည်းထွက်ကြဖို့တိုင်ပင်ကြပါတယ်။ မိသားစုနဲ့ အပြင်အလည်အပတ်သွားမယ့်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ရည်းစားနဲ့ချိန်းထားသူတွေ၊ ဘာမှမလုပ်ပဲ အိပ်မယ့်သူတွေ မျိုးစုံပါပဲ။ လူတစ်ကိုယ် အကြိုက်တစ်မျိုးမလား။ စာရေးသူကတော့ စာဖတ်ရင်ဖတ်၊ အိပ်ရင်အိပ် နဲ့ အချိန်ကုန်ဆုံးတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာတော့ အသည်းစွဲပါပဲ။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှု၊ ကိုယ်ချင်းစာတတ်မှု၊ ပျော်ရွှင်စရာ၊ ဟာသ အစရှိတဲ့ ခံစားမှုပေါင်းစုံကို ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာပဲ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ရရှိခံစားနိုင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်းက တကယ့်ကမ္ဘာအစစ်က နေရာတိုင်းကို ကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိခံစားရစေပါတယ်။
ဘာကြောင့်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာလို့ထင်ပါသလဲ။ အဖြေက ရှင်းရှင်းလေးပါ။ အချိန်ပိုင်းနဲ့ ကိုယ့်ခေါင်းထဲကို တစ်သက်တာမမေ့နိုင်စေမယ့် ခံစားမှုတစ်ခုကို ထည့်လိုက်နိုင်ခြင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ သဘောကွဲလွဲခွင့်ရှိပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကောင်းတစ်ကောင်းက လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို လွှမ်းမိုးသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်က ဘာရနိုင်မလဲဆိုတာချည်းမတွေးနဲ့၊ ကိုယ်ကဘာပေးနိုင်မလဲဆိုတာတွေး လို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ထဲကနေ အတုခိုးစရာတွေ၊ သင်ယူစရာတွေ၊ လိုက်နာသင့်တာတွေ များစွာရှိပါတယ်။ ပြောမကုန် ဟောမကုန်တွေဖြစ်ကုန်မှာစိုးလို့ ဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်လိုက်ပါတော့မယ်။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာလည်း အမျိုးအစားပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ စွန့်စားခန်းတွေကို ကြိုက်တာလား၊ အချစ်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တာလား၊ ကားတွန်းလား၊ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ဖွယ်လား၊ ဟာသကားလား များစွာရှိပါတယ်။
ဘယ်လို ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားပဲကြည့်ကြည့် ယူတတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။ ကိုယ်ကြည့်ဖူးတဲ့ ကားကောင်းလေးတွေကို ဖောက်သည်ချပါရစေ။ ကြည့်ဖူးကောင်းလည်း ကြည့်ဖူးပါလိမ့်မယ်။
Into the Wild ဇာတ်ကားလေးအကြောင်းပြောပါရစေ။ ထိုဇာတ်ကားထဲမှာဆို အသက် ၂၀ ကျော်၊ဘွဲ့ရပညာတတ်လူငယ်တစ်ဦး ၊မိသားစု၊ငွေရေးကြေးရေး ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိပဲ တောထဲကိုထွက်သွားခဲ့တယ်။ အဲ့ကားထဲမှာ စဉ်းစာစရာအချက်လေးက အစစအရာရာပြည့်စုံနေတဲ့ လူငယ်တစ်ဦးက ဘာကြောင့်အကုန် စွန့်လွှတ်ပြီး တောထဲကိုထွက်ခဲ့ရတာလဲ ဆိုတာပါပဲ။
MarginCall၂၄နာရီကာလပတ်လုံးဘဏ်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ခဲ့တဲ့အပေါ်အခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်တယ်။ ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်အစက ငွေကြေးကပ်ဆိုက်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ Zachary Quinto နှင့် Jeremy Irons အပါအဝင် မင်းသား၏လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ဘယ်လောက်ခက်ခဲပုံ နှင့် ပုန်းကွယ်နေတဲ့အရည်အချင်း စိတ်ကူးသစ်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်လာအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပုံတို့ကို ရိုက်ကူးပြထားတာဖြစ်တယ်။
The Godfather ဆိုတဲ့ကားပေါ့။ဒီကားတော့လူတော်တော်များများ ရင်းနှီးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်အဖြစ်သာမက ဝတ္တုအဖြစ်လည်း ကျော်ကြားပါတယ်။ မားဖီးယားဂိုဏ်းကြီးထူထောင်ပြီး ဒုစရိုက်မှုတွေကို စနစ်တကျကျူးလွန်ကာ စုံထောက်တွေ၊ ရဲတွေကို လက်တစ်လုံးခြားလှည့်ပတ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။
Beauty and the beast ကာတွန်းကားက Disney Animation ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထင်ကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ကို ပညာပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။ အဲ့လိုလူတစ်ယောက်ကို ကိုယ်ချင်းစာတတ်အောင်၊ စိတ်ရှည်တတ်အောင် ပညာပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။ ကားတွန်းကားဖြစ်ပါစေ ယူတတ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
နောက်တစ်ကားကတော့ Journey’s End ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ပြဇာတ်တွေမှာအောင်မြင်ပြီး ရုပ်ရှင်အဖြစ် အသက်သွင်းထားတဲ့ကားကောင်းပါ။ ဇာတ်လမ်းကတော့ ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးခါနီးမှာ ရန်သူတပ်နဲ့အနီးကပ်ဆုံး ရှေ့တန်းမှာ ၆ ရက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဗြိတိန်စစ်တပ် တပ်ခွဲအကြောင်းဖြစ်တယ်။ ဇာတ်ကားထဲမှာ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်မြက်ရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ပွဲဆန့်ကျင်တာတွေ တစ်ခုမှမပါပဲ စစ်သားအားလုံးရဲ့ အသိမှာ ရန်သူတွေ ကြာသပတေးနေ့လာမယ်၊ တပ်ကူတွေလာမှာမဟုတ်ဘူး ၊ပြန်လည်းမပြေးရဘူးဆိုတဲ့ အမိန့်ကို နောက်ဆုံးအထိ နာခံခဲ့ကြပုံကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်။
Shadow ဇာတ်ကားပေါ့။ဇာတ်လမ်းကျောရိုးကတော့ မိတ်ဆွေဖွဲ့ထားတဲ့ အင်အားကြီးနိုင်ငံတော်အောက်မှာ ပုန်မကန်ရဲ၊မိမိတိုင်းပြည်ကို ပြန်လည်မရယူရဲတဲ့ ဘုရင်တစ်ပါးနဲ့ မိမိတိုင်းပြည်ကို ပြန်လည်ရယူဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ စစ်သူကြီးတစ်ယောက်တို့ကြားက ပဋိပက္ခကို ဇာတ်လမ်းကကျောရိုးယူထားပါတယ်။ စစ်သူကြီးအစစ်မဟုတ်ပဲ ကိုယ်ပွားအတု (shadow) သာမာန်လူသားတစ်ယောက်။ဒီမှာတင် ထိုယောကျာ်း သုံးယောက်တို့ရဲ့ကိုယ်စီအားပြိုင်တဲ့အကြောင်းကို ဦးစားပေးပုံဖော်ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို ပြောချင်တာကတော့ အရမ်းလှတယ်ဆိုတာပဲ။ ဇာတ်ကားထဲမှာ အဖြူနဲ့အမဲ ပဲ ထင်ရလောက်အောင်ကို monochromatic ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲ လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့အသားအရောင်ကို Hightlight လုပ်ထားပြီး သွေးထွက်တဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းမှာဆို သွေးကို အရောင်အစစ် နဲ့အသုံးပြုထားတယ်။ ဒီမှာတင် တော်တော်လှသွားပြီဖြစ်တယ်။
ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ဆိုတာ အနားယူခြင်းတစ်မျိုးပါ။ကိုယ့်ခေါင်းထဲကို အသိတစ်ခု ထည့်သွင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ အနားယူရင်း ဗဟုသုတ တိုးတာပေါ့။
education language Movies Current
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အင်္ဂလိပ်စာကောင်းခြင်းရဲ့ အကျိုးရလဒ်
Myanmar RoboLeague ပြိုင်ပွဲအတွက် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ လျှောက်ထားနိုင်
လူငယ်တွေ တိုးတက်ဖို့ အတားအဆီးဖြစ်စေတဲ့အရာတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ
အလုပ်သင်ဘဝကို အတူတူဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းကောင်းများ
နှစ်သစ်မှာ လူသစ် စိတ်သစ်နဲ့ ပန်းတိုင်အသစ်တွေချမှတ်ကြရအောင်
International Translation Day 2019
POINT မှ Intern အစီစဉ်ကို စောင့်မျှော်နေကြသူတွေအတွက် သတင်းကောင်း .
POINT Youth Platform သည် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး စတင်လုပ်ကိုင်လိုသူများ၊ တိုးတက်မှုလမ်းစ ရှာဖွေနေသူ လူငယ်များအတွက် အခွင့်အလမ်းများ ဝေမျှရာနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးရာ Platform တစ်ခု ဖြစ်သည်။ (more…)
မင်းဘဝကို ပြောင်းလဲအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
မင်းဘ၀ အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က
#409, Bld no. 170-176 (MGW Center),
Bo Aung Kyaw Road, Bo Ta Htaung Township,
Asian businees Business care career child content Critical Thinking Culture current education english entertainment fast food Friend Gym Happiness headphone Health holiday IELTS insight Interpreter interview knowledge language leadership learning Lifestyle Lifesyle motivation online Peak Point Academy profile salary Scholarship school Start up startups students Technology Theo Maung TOFEL translation young
Copy Right @ Point Youth Platform WordPress Theme : By Sparkle Themes